Japana: Ny Ady Atrehan’Ireo Mitondra Ny Otrikaretina VHC · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Mey 2018 6:30 GMT
Tsy zava-baovao ao Japàna intsony ny tantaran'ireo fanomezana rà maloto. Ny taona 1980, marary maro nanaraka fitsaboana mikasika ny tsy fahampian-drà no nahazo ny otrikaretina VIH vokatry ny rà maloto nampidirina taminy, nohon'ny tsy fahampian'ny fanarahamaso avy amin'ny governemanta sy ireo Orinasa fivarotampanafody mahakasika ny fanapahankevitra tany aloha noraisin'ny FDA hanaisotra ny fankatoavany ireo vokatra.
Ny taona 1987, nisarika ny sain'ny mponina ho amin'ny fisian'ny aretina VHC mifindra amin'ny alalan'ny ra maloto ny nahitàna fa tratry ny hepatita C avokoa ireo vehivavy bevohoka maro tao Aomori nampidirana “fibrinogène”– izay, mbola nialàn'ny FDA ihany koa ny fankatoavana azy ny taona 1977. Teo anelanelan'ny taona 1969 sy 1994, nihanaka be ny aretina VHC teo anivon'ireo olona nodidiana sy teraka ary tsy voamarika nandritry ny taompolo maro.
Voarohirohy tamin'ireo raharaha roa ireo hatrany ny Green Cross Corporation (ankehitriny lasa Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation), hoy ivcccttea nanoratra :
Ny Green Cross Corporation dia naorin'i Naito Ryoichi (Lieutenant Colonel teo aloha), mpikambana tao amin'ny Unit 731 tao amin'ny Tafika Kwantung, ho toy ny toeram-pitehirizana rà tsy miankina taoriana kelin'ny ady. Manamboninahitra avy ao amin'ny Unit 731 avokoa ny ankamaroan'ny mpikambana tao aminy ary nanàna olana maro nifandraika tamin'ny fitsaboana ilay orinasa, anisan'izany ny rà maloto misy otrikaretina VIH. Ary tamin'ity indray mitoraka ity, ny aretina hepatita.
Ny taona 2002, notorian'ireo marary nahazo ny aretina hepatita C nohon'ny fampidirana rà maloto taminny governemanta sy ireo orinasa mpamatsy fanafody tao Tokyo sy Osaka. Ny taona nanaraka, fitoriana mitovy amin'izay ihany koa no natao tao Fukuoka, Nagoya ary Sendai. Tribonaly efatra no namoaka valim-pitsarana hoe ny fanjakana sy ireo orinasa mpivarotra fanafody no tomponandraikitra tamin'ny fihanak'ilay aretina VHC, fa ny tribonalin”i Sendai no nandà ny andraikitry ny Fanjakana. Tany am-piandohan'ity volana ity, nanolo-kevitra ho fanelanelanana ny fitsarana tao Osaka ka tamin'ny alàlan'izany ireo olona nahazo ny otrik'aretina VHC teo anelanelan'ny taona 1986 sy 1988 dia hahazo onitra, ary nametra fe-potoana ho an'ny governemanta hatramin'ny 20 Desambra 2007.
Kawada Ryuhei , parlemantera sy mpikambana fahiny tao anatin'ireo mpitory noho ny nahazoany VIH, teo anoloan'ny Ministeran'ny Fahasalamana 19 Desambra 2007
Tao amin'ny bilaoginy, Fukuda Eriko, iray amin'ireo mpitory tao Fukukoka, naneho ny fahadisoam-panantenany tamin'ny sosokevitra naroson'ny governemanta taorian'ilay fanapahankevitry ny fitsarana tao Osaka :
Tena tsy azo ekena.
Efa nolazaina fa tsy miady fotsiny ho an'ireo mpitory izahay.
Tsy ijerena izay fotoana nampidirana [ilay fanafody] tamin'izy ireo, na izay karazany, na mpitory izy ireo na tsia, ary na tsy nanana hadisoana aza izy ireo, ireo niharam-boina noho ny fahazoany ny hepatita, niharatsy ny fahasalamany ary tsy maintsy nandalo fotoan-tsarotra ihany koa ireo olona sy fianakaviana maro nanodidina ary ireo. Simba ny fiainan'izy ireo.
Tokony hitovy foana ny fanonerana / fanamaivana azy rehetra.
“Tiako ho topazana maso ilay tolokevitra nivoaka tamin'ny 13 (Desambra) handinihiko azy,” hoy izy.
Kanefa efa nalefa [any aminy] ilay tolokevitra.
Tsy lefitro ny nieritreretany hoe ho ekentsika ilay tolokevitra izay natao fotsiny ho hanamaivamaivana ireo mpitory.
Ezahan-dry zareo ny tsy hiraharaha ny sasany amin'ireo niharam-boina sy manao izay hamaranana ilay resaka.
Mpanohana nanao hetsipanoherana teo ivelan'ny Ministeran'ny Fahasalamana
Nahasarika ny haino aman-jery sy ny vahoaka ilay raharaha. Hoy i Kokoro avy amin'ny wanbalance nanoratra hoe :
Satria notohizan'ny fanjakana ny fanekena ny fanafody mahatsiravina tahàka izany, noho izany anjaran'ny fanjakana ny fanonerana azy. Tsy izay ihany ny olana. Fa tsy mba ampangaina amin'ny heloka nataony izy ireo ary afaka madiodio mora foana. Iza moa izy ireo no nanapa-kevitra ny hanohy ny fivarotana ilay fanafody tao anaty fotoana sarotra ? Moa kolikoly mitovy amin'ilay raharahan'ny Minisitry ny Fiarovana va ity? Raha tsy izany, midika ve izany hoe mitranga izany zavatra rehetra izay dia satria nisy ny kolikoly nifanaovan'io orinasa io– izay mbola nanohy nivarotra fanafody izay fantatr'izy ireo fa mahafaty sy efa najanona tao Etazonia.– sy ireo mpitàna biraom-panjakàna?
Bilaogera iray hafa antsoina hoe pochi no niresaka momba ny lahatsoratra roa nivoaka an-gazety, ny iray [ja] mikasika ny fanonerana ireo tratry ny VHC ary ny iray [ja] hafa mikasika ny 800 lavitrisa yens momba ireo bala afomanga ho fiarovana.
Araka izany, moa tena volabe tokoa ve ireo 180 lavitrisa yen na 570 lavitrisa yen ireo ?
Ampitahao ireo lahatsoratra roa etsy ambony.
Amin'ny lafiny iray, miresaka momba ny drafitra handaniana 800 lavitrisa ka hatramin'ny 1.000 lavitrisa yen ao anatin'ny dimy taona manaraka izy ireo, ary mety ho avo roa heny izany na mety mbola hihoatra aza … Ary, “mety ho tsy misy ilàna azy akory aza” ny vokatra …pfff…
Ary etsy ankilany, ny 1800 lavitrisa na 5700 lavitrisa yen no vola tokony homena ireo olona tsy manantsiny kanefa dia nitondra takaitra vokatry ny nataon'ny fanjakana sy ny orinasa mpamatsy fanafody.
Te-hanontany indray ny tsirairay aho.
Tena vola be tokoa ve ny 180 lavitrisa na 5700 lavitrisa yen ?
Ilaina ve ny “manipika” (manilika tsotra izao) an'ireo vahoaka tokony honerana ?